Coinbase anotanga kwokupedzisira kuidzwa Segwit - Blockchain News
Coinbase anotanga kwokupedzisira kuidzwa Segwit
Coinbase akazivisa pamusoro Twitter kuti Bitcoin SegWit yokuedzwa iri kwayo yokupedzisira maitikiro, uye achava dziripo Bitcoin nokutumira uye vachigamuchira “anotevera mavhiki mashoma.” Izvi chakagadzirirwa kuderedza mari Bitcoin uye chinja nguva, uye zvakare kuderedza mutoro pamusoro pomumbure wayo.
BTC: USD maviri pamusoro Coinbase raMwari GDAX Exchange nyaya inenge 5% kuti bitcoin zuva nezuva zvokutengeserana vhoriyamu, maererano CoinMarketCap. Kamwe iwe wedzera mamwe Coinbase bhuroka BTC basa, dzimwe mari maviri uye dzimwe kwema hazvina kufunga kuti rebei chikamu kwema zuva zvichiitika kuburikidza Coinbase / GDAX.
Zvazvakadaro kukura ichi aigona feasibly kuva kuoneka kubatsira pose Bitcoin kutengeserana nguva uye mari.
Previous Post:Munyika dzakasiyana, bitcoin mitengo dzingasiyana
Next Post:Exchanges Crypto mana chete kuteerera zvinodiwa South Korean regulator